Ôrfisma - Wikipedia
Ny ôrfisma dia antokom-pivavahana sy fanao ara-pivavahana niainga tany amin' ny tontolo grika sy helenistika taloha, ary koa avy amin' ny Trakiana, mifandray amin' ny asasoratra heverina fa an' ilay pôeta Ôrfeôsy, izay nidina tany amin' ny tontolo ambanin' ny tany sy niverina avy any (araka ny fedrà grika). Ireo mpanaraka ny ôrfisma (atao hoe Ôrfika) dia nanaja an' i Diônisôsy (izay nidina tany ambanin' ny tany sy niverina avy any indraimandeha) sy Persefôna (izay nidina isan-taona tao amin' ny ambanin' ny tany sy niverina avy isan-taona). Ny ôrfisma dia faritana ho toy ny fanavaozana ny fivavahana diônisiana teo aloha, izay momba ny fivoasana vaovao ny hevitry ny nofy sy famakiana amin' ny fomba vaovao ny angano momba an' i Diônisôsy sy ny fandaminana vaovao ny Teôgônian' i Hesiôdôsy, miorina amin' ny ampahany amin' ny filôzôfia talohan' i Sôkraty.
Ny ivon' ny ôrfisma dia ny fijaliana sy ny fahafatesan' ny andriamanitra Diônisôsy teo am-pelatanan' ny Titàna, izay fototry ny angano na fedrà iorenan' ny ôrfisma. Araka io fedrà io, dia novonoin' ny Titàna ilay Diônisôsy zazakely, voaviravira ary lanin' ny Titàna. Ho valifaty, dia namely ny Titàna tamin' ny varatra i Zeosy, ka nahatonga azy ireo ho lasa lavenona. Avy amin' izany lavenona izany no teraka ny olombelona. Ao amin' ny finoana ôrfika, io fedrà io dia mamaritra ny fananan' ny olombelona toetra roa: vatana (grika: σῶμα / sôma), nolovaina tamin' ny Titàna, ary pitik' afon-janahary na fanahy (grika: ψυχή / psukhḗ), nolovaina tamin' i Diônisôsy. Mba hahazoana famonjena avy amin' ny fisiana ara-materialy (atao hoe Titanika), dia tsy maintsy misy ny fanofanana amin' ny mistery diônisiana ary miatrika teletē, fombafomba fanadiovana sy fiainanana indray ny fijaliana sy famerenana ny fahafatesan' ilay andriamanitra. Nino ny Ôrfika fa aorian' ny fahafatesana dia hiaina mandrakizay miaraka amin' i Ôrfeôsy sy ireo maherifo hafa. Ireo tsy nahazo ny fiofanana (grika: ἀμύητος / amúētos) dia ninoan' izy ireo fa ho teraka mitsingeringerina ao amin' ny vatana mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Mba hitazonana ny fahadiovan' izy ireo amin' ny alalan' ny firosoana manaraka fombafomba, ny Ôrfika dia niezaka ny hiaina amin' ny fampijalian-tena afaka amin' ny fandotoana ara-panahy, indrindra amin' ny alalan' ny tsy fihinanana afa-tsy zavamaniry miampy tsy fihinanana karazana voamaina sasany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ôrfisma&oldid=1040689"
Voaova farany tamin'ny 2 Desambra 2021 amin'ny 12:12 ity pejy ity.